असोज १३, काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको आईपीओमा मागभन्दा ७ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
विक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार मंगलवार साँझ ५ बजेसम्म ६ लाख ८२ हजार ७७२ जना आवेदकबाट १ करोड ९१ लाख ९४ हजार ८३० कित्ता शेयर खरीदका लागि आवेदन परेको हो । जुन मागभन्दा ७ गुणा बढी हुन आउँछ ।
उक्त कम्पनीले कुल ३० लाख कित्तामध्ये ४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरी ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषलाई बाँडफाँट पश्चात बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री खुला गरेको हो ।
आईपीओमा आवेदन दिने अन्तिम दिन बुधवारसम्म रहेको छ । छिटो अवधिभित्रै मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेकाले विक्री बन्द हुन लागेको विक्री प्रबन्धकको भनाइ छ ।
आईपीओ विक्रीको छिटो अवधि असोज १४ र ढिलोमा असोज २५ गतेसम्म तोकिएको थियो । यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
आईपीओ खरीदका लागि आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयसँगै मेरो शेयर मार्फत घरबाट आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले आईपीओ विक्री गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गत भदौ २४ गते अनुमति पाएको थियो ।
हाल संस्थापकतर्फको रू. ७० करोड चुक्तापूँजी रहेको उक्त कम्पनीको आईपीओ पश्चात रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम हुनेछ । आईपीओ विक्री पश्चात कम्पनीमा सर्बसाधारणतर्फको ३० प्रतिशत र संस्थापकतर्फको ७० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम हुनेछ ।
उक्त कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०४ दशमलव शून्य २ रहेको छ भने प्रतिशेयर आम्दानी रू. २ दशमलव २५ रहेको छ ।
बडादसैंपछि खुलेको नेप्से १०.९३ अंक बढ्यो, ४५ करोड ४९ लाखभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री [२०७७ कार्तिक, १२]